ရာနှုန်းပြည့်အဆင်ပြေတဲ့ IDM ( Internet Download Manager ) 6.28 Build 17 Full - မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
Home Computer software Internet Download Manager နည်းလမ်းများ ရာနှုန်းပြည့်အဆင်ပြေတဲ့ IDM ( Internet Download Manager ) 6.28 Build 17 Full
ရာနှုန်းပြည့်အဆင်ပြေတဲ့ IDM ( Internet Download Manager ) 6.28 Build 17 Full
Maung Pauk at 11:53:00 AM Computer software, Internet Download Manager, နည်းလမ်းများ,
IDM 6.28 Build 17 Full
IDM 6.28 Build 14 ကစပြီး IDM Version တွေ Full Crack ရခဲ့ပေမယ့် Browser Add-ons မှာ အလုပ်မလုပ်တာ၊ Fake Serial တွေပြတာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်.....
ကဲ.. ခု ဘာ Fake Serial မှ မပြအောင်၊ Browser တွေနဲ့လည်း အဆင်ပြေအောင် လုပ်နည်းတစ်ခု ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်.. စမ်းသပ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်..
1. ပထမဆုံး အောက်ကလင့်ကနေ နောက်ဆုံးထွက် IDM Setup ကိုဒေါင်းပြီး Install လုပ်လိုက်ပါ..
IDM Link 1
2. Start Menu ကနေ Notepad ကို ညာကလစ်ထောက်ပြီး Run as Administrator နဲ့ ဖွင့်ပါ..
3. File>Open ကိုနှိပ်ပြီး C:\_Windows\_System32\_drivers\_etc အောက်က host ကိုရွေးပြီး Open ကိုနှိပ်ပါ.. ( C:\_Windows\_System32\_drivers\_etc ကိုရောက်တဲ့အချိန် host ကိုမမြင်ရရင် File Name ရဲ့ ညာဘက်က File Type မှာ All File ကိုရွေးပေးလိုက်ရင် host ကိုမြင်ရပါမယ်.. )
4. host က Notepad မှာပွင့်လာရင် အောက်က ကုဒ်တွေကိုကူးပြီး အောက်ဆုံးမှာ Paste ထည့်ပေးလိုက်ပြီး Save ကိုနှိပ်ပါ.. Notepad ကိုပိတ်ပါ..
5. ပြီးရင် အင်တာနက်ကိုပိတ်ပါ.. IDM ကိုဖွင့်ပါ.. Registration ကိုနှိပ်ပြီး ပထမနာမည်၊ ဒုတိယနာမည်၊ အီးမေးတစ်ခုခုထည့်ပြီး ကီးကိုအောက်က ကီးတွေထဲက တစ်ခုခုဖြည့်ပေးလိုက်ပါ.. error တွေဘာတွေတက်လာရင် ပိတ်ပစ်လိုက်..
6. ပြီးရင်တော့ အင်နက်ဖွင့်ပြီး IDM ကိုစိတ်ချလက်ချ သုံးနိုင်ပါပြီ...
7. Fake Serial ထပ်တက်လာသေးရင် အောက်ကလင့်ကနေ Universal Crack ဒေါင်းပြီး Patch ကိုသာနှိပ်ထည့်လိုက်ဗျာ...
Computer software, Internet Download Manager, နည်းလမ်းများ
Computer software Internet Download Manager နည်းလမ်းများ